Tuesday September 25, 2018 - 16:17:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa ku eedeysay ciidanka cirka Yahuudda in ay mas'uul ka ahaayeen dhimashada 15 askari Ruushiyaan ah iyo burburka diyaarad melleterigu adeegsado oo nuuceedu ahaa (iil20).
Igor Konashnikov oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Moscow ku sheegay in ciidanka cirka Yahuudda ay saldhigooda melleteri ee suuriya kusoo wargeliyeen in ay duqeynayaan xarumo uu nidaamka bishaar al-asad ku leeyahay suuriya si looga fogaado isku dhac labada dhinac dhaxmara balse wuxuu wargelintaas ku tilmaamay mid aan waxba tarayn sababa laxiriira waqtiga duqeynta oo ay ka dhineed muddo hal daqiiqo oo kaliya.
dowladda Ruushka waxay ku cataawday in diyaaradaha Yahuudda F16 ay duqeymo ba'an ka geysteen magaalada laadiqiyah ee galbeedka suuriya balse diyaaradda lasoo riday ee (iil20) uu duuliyaheedu awoodi waayay in uu dib ugu laabto saldhigga meleteriga Ruushka Xumeymiim ee suuriya.
Afhayeenka uhadlay xukuumadda Moscow ayaa yahuudda si toos ah ugu eedeeyay in ay jabisay heshiis ay lagashay sanaddii 2015 oo ahaa in ay soo ogeysiiso marka ay duqeyn ka geysanayso Suuriya si looga gaashaanto isku dhac melleteri.
Labadan dowladood ayaa ku lug leh dagaalka suuriya ka socda, Ruushka ayaa shacabka muslimiinta sunniga ah gummaadaya isagoo taageeraya nidaamka al-asad halka Yahuuddu ay xagga cirka ka beegsato saldhigyada Maleeshiyaadka shiicada iiraaniyiinta iyo kuwa ciidamada al-asad waana dano iskasoo horjeedo oo labadan awoodood ka leeyihiin suuriya.
Dhinaca kale afhayeen u hadlay melleteriga Yahuudda ayaa diiday in iyagu ay dusha uritaan mas'uuliyadda dhimashadii 15 askari ruushiyaanka ah iyo diyaaradda soo dhacday, inkastoo labadan dhinac ay eedeymo kulul hawada isku marinayaan hadane nidaamka bishaar al-asad oo isago soo riday diyaaradda ruushka ayaan wali wax war ah kasoo saaran buuqa udhaxeeya ruushka iyo Yahuudda.
Sawirro: Dab baabi'iyay Hanti badan oo ka kacay beeraha Wadanka Suuriya.